Multilayer PCB, rigid 8 layer printed board. 8 layer, TG170, ENIG 2U” Matte green mask, 1.5mm thick, humidity indicator, - တရုတ် Multilaတောင့်တင်းသောCB,အလွှာပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့ntedအလွှာd.TG170yeENIG 2U "မက်တီအစိမ်းရောင်မျက်နှာဖုံးgreenမီလီမီတာအထူ.5စိုထိုင်းဆညွှန်းကိန်း indicator, ကုန်သွင်းသူ,စက်ရုံ -WMD
Multilayer PCB, တောင့်တင်းသော 8 အလွှာပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့. 8 အလွှာ, TG170, ENIG 2U "မက်တီအစိမ်းရောင်မျက်နှာဖုံး, 1.5မီလီမီတာအထူ, စိုထိုင်းဆညွှန်းကိန်း,
လေဟာနယ် အထုပ်,10panel က / အိတ်,ပျဉ်ပြားအကြားစက္ကူ
8 အလွှာ FR4 TG170 အစိမ်းရောင်
8 အလွှာ multilayer ဘုတ်အဖွဲ့
နှင့်အတူမြင့်မားသောအလွှာ 8 အလွှာ
Multilayer ဘုတ်အဖွဲ့ PCB, မြင့်မားသောတိနှင့်အတူရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့, ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အရွယ်အစား 294,8 * 184MM / 3up, panel ကအဖြစ်သင်္ဘော, 1.5မီလီမီတာ - 1 အောင်စအယ်လ်အလွှာ- 8 အလွှာ - FR4 TG170, အစိမ်းရောင်ဂဟေဆက် Matte က x ကိုတှနျးလှနျ 2, NO Silkscreen, မျက်နှာပြင်ကုသမှု "ENIG 2U ဖြစ်ပါသည်. ul မှတ်သားခြင်းနှင့်အတည်ပြု, အလွှာရေတွက်ဖြစ်ပါသည် 8, IPC CLASS 2, အားလုံး soldermask ဆည်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရပါမည်.
နည်းပညာဆိုင်ရာ features တွေအချို့အခက်အခဲနှင့်အတူ multilayer ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်. လျင်မြန်စွာအလှည့်ရှေ့ပြေးပုံစံ, တစ်ချိန်ကစမ်းသပ်ပြီး, မြင့်မားသော Volume ကိုထုတ်လုပ်မှုလက်ခံသည်. ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသည်. DHL နေဖြင့်ဖြန့်ဝေဖော်ပြ, ယူပီအက်စ်, Fedex, TNT သို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဆိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်း, ပင်ပင်လယ်နားမှာက. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည်, မည်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
တင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ PCB,6အားလုံးအလွှာ 2oz အလွှာ, LF HASL, Multilayer PCB, Black က soldermask PCB, ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ် (PCB), တင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, မြင့်မားသောအလွှာ PCB ဘုတ်အဖွဲ့.
ENIG2layes စံ PCB ul ဖုန်စုပ် Pack 1oz Professional က PCB စက်ရုံရိုးရှင်းသောနှစ်ချက် Panel ကို FR4 1 / စာရင်းပေါက်
high-တိကျစွာ Multilayer PCB 6Layers TG150 ENIG 2U "2.0mm ဘုတ်အဖွဲ့အထူ